Email Yekutarisa: 13 Matanho Usati Wadzvanya Tumira! | Martech Zone
Email Yekutarisa: 13 Matanho Usati Wadzvanya Tumira!
NeChishanu, Gumiguru 7, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Isu tinoburitsa huni yeemail vhiki rega rega uye kuverenga kwedu kwakaputika kune vanopfuura zviuru mazana mana nemazana manomwe! Ini ndaida kugovera matipi edu uye yekutarisa yatinoenda nesvondo rega rega tisati tadzvanya bhatani rekutumira.
Zviri mukati mako akakodzera, akakodzera, anotarisirwa, uye akakosha kune anonyorera? Kana zvisiri - saka usazvitumira!
Paunongotumira iyo email, panowanzo kuve nezvinhu zviviri chete izvo munhu ari kuitambira anozviona… wekutanga ndewekuti email inobva kupi. Ndiyo yako kubva pazita zvinoenderana nekutumira kwega kwega? Kero yako yeemail inozivikanwa here?
Chinhu chechipiri ndechako mutsara wenyaya. Kurova mbongoro here? Icho mutsara wenyaya unokwevera ivo mukati uye unovaita kuti vade kuvhura iyo email kuti vaverenge izvo zvemukati zvakanaka mukati? Kana zvisiri, vanhu vanozozvidzima panguva ino.
Kana iwe uine mifananidzo, uri kushandisa here alt tags kunyora mamwe mavara anozotyaira muverengi kurodha pasi iyo mifananidzo kana kukwanisa kutora matanho pasina mifananidzo?
Marongerwo ako ari nyore kuverenga pane Mobile device? Zvinosvika makumi mana muzana emaemail ese anoverengwa izvozvi parunhare uye iyo nhamba iri kuramba ichikura gore rega rega. Kana iwe uine yakafara email ine refu yekuteedzera mameseji, muverengi anozove anonetsekana kufamba nekudzoka. Kurova kudzima kuri nyore zvikuru.
Kana iwe uri kutumira email mune HTML fomati, pane here Nice link mumusoro wekuti vanhu vangobaya uye tarisa iyo email mubrowser?
Wakatarisa email here chiperengo, girama uye kudzivisa mazwi anogona kukutsvaira mukati muJunk Email dhairekitori?
Chii chaunoda kuti muverengi aite mushure mekunge vaverenga email? Iwe wakapa yakakura kudana-ku-kuita kuti ivo vatore danho iri?
Pane here rumwe ruzivo rwakawedzerwa iwe rwaunogona kubvunza muverengi kuti rungakubatsire chinangwa uye chidimbu zvirimo zvauri kutumira kunze? Sei usinga bvunze chimwe chidimbu cheruzivo mune yega email?
Waka edza iyo email pane rondedzero ine uye isina data kuti uone mashandisirwo etambo uye zvine simba zvemukati zvinoratidza? Ma link ese akashanda here?
Unoita iwe pakarepo svika padanho kana kushaya simba kuburikidza nendima dzekunetsa kushambadzira taura? Vanhu vakabatikana - rega kutambisa nguva yavo!
Uri kupa vanhu vane nzira ye kusarudza kubuda yeemail yako kutaurirana? Kana zvisiri - iwe unonyatsoda kuenda nemvumo huru-yakavakirwa email anotipa.
Uri kupa vanhu vane nzira ye kugovana zvirimo kungave kuburikidza nekutumira kushamwari bhatani kana kushamwaridzana kugovana mabhatani? Uye kana vakagovana - peji rako rekumhara rine bhaisikopo pazviri?
Ini ndinonyorera uye ndonyoresa kubva kumaemail nguva dzese. Ini ndinogara ndichipa kambani bhenefiti yekusahadzika pandinonyorera asi pandinongowana ndadzima maemail akawanda kubva kwavari nekuti haana kukosha… Ini ndinozvinyoresa uye handimbozoite bhizinesi zvakare ne kambani. Kana iwe uchizosundira meseji kune mumwe munhu - iva netsika uye remekedza nguva yavo uye ubudise huru email!
Mobile iri Pano. Yako Saiti HAIYO.